Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Kanada hanokatra sisin-tany ho an'ireo mpandeha vaksiny feno
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny sidina iraisam-pirenena mitondra mpandeha dia avela hidina amin'ny seranam-piaramanidina kanadianina dimy fanampiny.
Ny governemanta dia mikasa ny hanokatra ny sisintanin'i Kanada amin'ireo mpandeha vaksiny feno izay nahavita ny vaksiny feno vaksiny eken'ny Governemanta Kanadiana farafahakeliny 14 andro mialoha ny nidirany tany Canada.
Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy mampiasa ArriveCAN (app na vavahady tranonkala) handefasana ny mombamomba ny diany.
Ny mpandeha rehetra, na inona na inona satan'ny vaksiny, dia mbola mitaky valim-panadinana mololoola COVID-19 alohan'ny fidirana.
Ny Governemanta Kanada dia manao laharam-pahamehana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olon-drehetra any Canada amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mifototra amin'ny risika sy fandrefesana hanokatra indray ny sisintaninay. Noho ny asa mafy nataon'ny Kanadiana, ny fiakaran'ny tahan'ny vaksiny ary ny fihenan'ny tranga COVID-19, ny Governemanta Kanada dia afaka nandroso tamin'ny fepetra namboarina.
Tamin'ny 7 septambra 2021, raha toa ka mbola manohana hatrany ny toe-javatra iadiana amin'ny areti-mifindra ao an-trano, dia mikasa ny hanokatra ny sisintanin'i Canada ho an'ireo mpandeha vita vaksiny feno izay nahavita ny vaksiny feno vaksiny eken'ny Governemanta Kanadiana farafahakeliny 14 andro alohan'ny hidirana. Kanada sy izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fidirana.
Dingana voalohany, manomboka ny 9 aogositra 2021, Kanada mikasa ny hanomboka hamela fidirana amin'ireo olom-pirenena amerikana sy mponina maharitra, izay monina any Etazonia ankehitriny, ary vita vaksiny tanteraka farafahakeliny 14 andro alohan'ny hidirany any Canada ho an'ny dia tsy ilaina. Ity dingana savaranonando ity dia ahafahan'ny Governemanta Canada miasa tanteraka ny fepetra fari-pitsipika namboarina alohan'ny 7 septambra 2021, ary miaiky ny fifandraisana akaiky eo amin'ny Kanadiana sy ny Amerikanina.
Miankina amin'ny fanilikilihana voafetra, ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy mampiasa ArriveCAN (app na vavahadin-tranonkala) handefasana ny mombamomba ny dia. Raha toa ka afaka miditra any Kanada izy ireo ary mahafeno fepetra manokana, dia tsy tokony hatokana ho an'ny mpitsangatsangana vaksiny tanteraka ireo rehefa tonga any Kanada.
Mba hanohanana bebe kokoa ireo fepetra vaovao ireo, ny Transport Canada dia manitatra ny fari-pahalalana ny efa misy Filazana ho an'ny Airmen (NOTAM) izay mitarika sidina mpandeha ara-barotra iraisam-pirenena kasaina ho any amin'ny seranam-piaramanidina kanadianina efatra: seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Montréal-Trudeau, seranam-piaramanidina iraisampirenena Toronto Pearson, seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Calgary ary seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vancouver.